Tag: suuq geyn xisaabeed | Martech Zone
Tag: suuq ku saleysan xisaab
Iibsashada B2B way isbadashay - iibsadayaasha maanta waa kuwo aan la aqoon, jajaban oo adkaysi leh. B2B Iibinta iyo Suuqgeynta dadaallada waxay sii wadaan inay noqdaan kuwo sii yaraada oo aan waxtar lahayn maadaama kooxaha dakhliga soo saara ay u dagaallamayaan weligood sii yaraanaya dareenka macaamiisha iyo rajada laga qabo jawi durba ciriiri ah oo sii kordhaya. Si loo tartamo oo loo guuleysto maanta, kooxaha dakhliga B2B waxay u baahan yihiin inay beddelaan qaabkooda si ay ula jaan qaadaan dalabaadka iibsadayaasha casriga ah ee B2B. Muuqaalka iibsiga B2B ee maanta, iibsadayaashu waa: Anonymous - In
Khamiis, Janaayo 25, 2018 Jimco, Janaayo 26, 2018 Douglas Karr
Markii ugu horraysay ee aan maqlo ereyga Suuq-Ku-saleysan Dhowr sano ka hor, waan taahay. Ilaa intii aan ka shaqeynayay shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn, waxaan haysannay wakiillo iibiya oo muhiim ah oo baaray, bartilmaameedsaday, oo xiray akoonnada waaweyn. ABM kaliya maahan eray sir ah, in kastoo. ABM wuxuu ku hanaqaaday nidaam la xaqiijiyay, oo sifiican loo hagaajiyay oo leh qalab qurux badan si uu uga caawiyo aqoonsiga fursadaha iyo inuu ula socdo ilaa iyo dhamaadka. ABM wuxuu sii wadaa inuu cirka isku shareero caannimada iyo korsashada
Suuqgeynta ku saleysan xisaabta (ABM) ayaa ka dhex guuleysaneysa suuqleyda B2B. Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan, 2017 B2B Programmatic Outlook, 73% ee suuqleyda B2B ayaa hadda isticmaala ama qorsheynaya inay korsadaan ABM sanadka 2017. Waana sabab macquul ah: ABM's ROI wuxuu ka fiicnaan karaa dhammaan maalgashiyada suuqgeynta B2B. ABM ma aha fikrad cusub. Xaqiiqdii, qaar baa ku doodaya in ABM uu jiray ilaa iyo intii suuqgeyntu jirtay. Waa istiraatiijiyad loola dhaqmo koonto kasta sida a